Ntụziaka gbasara Ụbọchị Izu Ike (1-3)
Onyinye ndị e wetara maka ụlọikwuu (4-29)
Mmụọ Chineke jupụtara n’ime Bezalel na Oholiab (30-35)
35 Mosis mechara kpọkọta nzukọ Izrel niile wee sị ha: “Ihe ndị a ka Jehova nyere anyị iwu ka anyị mee:+ 2 E nwere ike ịrụ ọrụ ụbọchị isii, ma ụbọchị nke asaa ga-adịrị unu nsọ. Ọ bụ ụbọchị izu ike a ga-edebere Jehova, nke a ga-ezu naanị ike na ya.+ Onye ọ bụla rụrụ ọrụ n’ụbọchị ahụ, a ga-egbu ya.+ 3 Unu amụnyela ọkụ n’ebe ọ bụla unu bi n’Ụbọchị Izu Ike.” 4 Mosis gwaziri nzukọ Izrel niile, sị: “Jehova nyere iwu, sị, 5 ‘Sinụ n’ihe ndị unu nwere wetara Jehova onyinye.+ Ka onye ọ bụla nwere obi inye ihe+ wetara Jehova onyinye: ọlaedo, ọlaọcha, ọla kọpa, 6 eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, ezigbo eri linin, ajị ewu,+ 7 akpụkpọ ebule e sijiri ọbara ọbara, akpụkpọ anụ sil, osisi akeshịa, 8 mmanụ a ga na-agbanye n’ọkụ,* mmanụ balsam a ga-eji na-ete mmadụ mmanụ ma jirikwa na-eme insens na-esi ísì ọma,+ 9 nkume ọnịks, na nkume ndị ọzọ a ga-akwụnye n’efọd+ nakwa ndị a ga-akwụnye n’akpa a na-anya n’obi.+ 10 “‘Ka ndị niile nwere nkà*+ n’ime unu bịa rụọ ihe niile Jehova nyere n’iwu, 11 ya bụ, ụlọikwuu ahụ na ákwà ya na ihe a ga-eji kpuchie ya, nko ya na frem ya, okporo osisi ya, ogidi ya, na ntọala ya ndị nwere oghere; 12 Igbe ahụ+ na okporo osisi ya,+ okwuchi ya,+ na ákwà mgbochi+ a ga-eji gechie ya; 13 tebụl+ na okporo osisi ya na arịa ya niile nakwa achịcha a na-enye Chineke;+ 14 ihe e ji adọsa ọkụ*+ nke ga na-enye ìhè na arịa ya na ọkụ* ya nakwa mmanụ a ga-eji na-amụ ọkụ;+ 15 ebe ịchụàjà insens+ na okporo osisi ya; mmanụ a ga-eji na-ete mmadụ mmanụ na insens na-esi ísì ọma;+ ákwà ngebichi* nke ga-adị n’ọnụ ụzọ e si abata n’ụlọikwuu ahụ; 16 ebe ịchụàjà nke àjà a na-esu ọkụ+ na ihe e ji ọla kọpa kpaa a ga-etinye n’ime ya, okporo osisi ya na arịa ya niile; nnukwu ite na ihe a ga-eji adọkwasị ya;+ 17 ákwà mgbochi ndị ga-adị n’ogige ụlọikwuu,+ ogidi ya na ntọala ya ndị nwere oghere; ákwà ngebichi* nke ga-adị n’ọnụ ụzọ ogige ahụ; 18 mkpọ́ ndị e ji ejide ụlọikwuu na mkpọ́ niile e ji ejide ogige ụlọikwuu ahụ na ụdọ ha;+ 19 uwe ndị a kpara nke ọma+ a ga-eyi na-eje ozi n’ụlọikwuu, uwe nsọ Erọn+ onye nchụàjà, na uwe ụmụ ya ndị nwoke ga-eyi na-arụ ọrụ nchụàjà.’” 20 Nzukọ Izrel niile wee si n’ihu Mosis pụọ. 21 Onye ọ bụla o metụrụ n’obi+ na onye ọ bụla ọ gụrụ agụụ* inye ihe bịara wetara Jehova onyinye a ga-eji arụ ụlọikwuu nzute, ihe ndị a ga-eji na-eje ozi na ya, nakwa ihe ndị a ga-eji mee uwe nsọ ndị ahụ. 22 Ha nọ na-abịa, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị, onye ọ bụla nke nwere obi inye ihe. Ha nọ na-eweta ọla a na-etinye n’uwe, ọla ntị, mgbaaka, ihe ndị ọzọ e ji achọ mma, na ụdị ihe ọ bụla e ji ọlaedo mee. Ha niile wetaara Jehova àjà ọlaedo.*+ 23 Ndị niile nwere eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, ezigbo eri linin, ajị ewu, akpụkpọ ebule e sijiri ọbara ọbara, na akpụkpọ anụ sil wetara ha. 24 Ndị niile chọrọ inye onyinye ọlaọcha na ọla kọpa wetaara Jehova onyinye ha. Ndị niile nwekwara osisi akeshịa a ga-eji arụ nke ọ bụla n’ọrụ ahụ wetara ya. 25 Ụmụ nwaanyị niile ndị nwere nkà+ ji aka ha mee eri, ha wetakwara ihe ndị ha mere: eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, na ezigbo eri linin. 26 Ụmụ nwaanyị niile ndị nwere nkà bụ́ ndị o metụrụ n’obi ji ajị ewu mee eri. 27 Ndị isi wetara nkume ọnịks na nkume ndị ọzọ a ga-akwụnye n’efọd nakwa ndị a ga-akwụnye n’akpa a na-anya n’obi,+ 28 na mmanụ balsam na mmanụ a ga na-agbanye n’ọkụ* na mmanụ a ga-eji na-ete mmadụ mmanụ+ ma jirikwa na-eme insens na-esi ísì ọma.+ 29 Ụmụ nwoke niile na ụmụ nwaanyị niile o metụrụ n’obi wetara ihe maka ọrụ Jehova si n’ọnụ Mosis nye iwu ka a rụọ. Ndị Izrel wetara ha ka ha bụrụ onyinye si ha n’obi ha nyere Jehova.+ 30 Mosis wee gwa ndị Izrel, sị: “Lee, Jehova ahọrọla Bezalel,* onye ebo Juda. Ọ bụ nwa Yuraị, nwa nwa Họọ.+ 31 Chineke emeela ka mmụọ ya jupụta n’ime ya, ka o wee nwee amamihe na nghọta ma mara otú e si arụ ọrụ ọ bụla e ji nkà arụ, 32 ka o nwee ike ise otú ihe dị iche iche a ga-arụ arụ ga-adị, ka o nwee ike iji ọlaedo, ọlaọcha, na ọla kọpa arụ ọrụ, 33 ka o nwee ike ịwa nkume na ịkwụnye nkume n’ebe ha ga-adị, na ịrụ ụdị ihe niile e ji osisi arụ. 34 O meela ka ya na Oholiab,+ nwa Ahisamak, onye ebo Dan, mara otú ha ga-esi akụziri ndị ọzọ ihe. 35 O meela ka ha bụrụ aka ochie*+ n’ịrụ ọrụ niile e ji nkà arụ, n’ọrụ ịkpa ihe n’ákwà, nakwa n’ọrụ iji eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie na ezigbo ákwà linin akpa ihe, nakwa n’ọrụ ikwe ákwà. Ụmụ nwoke ndị a ga-arụ ụdị ọrụ ọ bụla, kwadebekwa otú ihe dị iche iche a ga-arụ ga-adị.
^ Ma ọ bụ “n’oriọna.”
^ Ma ọ bụ “onye ọ bụla mmụọ ya kpaliri.”
^ Na Hibru, “akpọọla Bezalel aha.”
^ Na Hibru, “ka obi ha mara ihe.”